Ezona zi-8 ziBalaseleyo zeGqabi leSityalo, ngokweMphathi weLandscape - Igadi
Ezona zi-8 ziBalaseleyo zeGqabi leSityalo, ngokweMphathi weLandscape
Ndedwa kwikona endlwini yakho? Kucelwa isityalo esilungileyo, esikhulu segqabi ukuze izinto zitshintshe kwaye zitshintshe indawo ibe yindawo yokubonelela ngeoksijini. Kodwa okokuqala nokuphambili, xa ukhetha izityalo zendlu, ngakumbi izityalo ezinamagqabi amakhulu, 'qinisekisa ukuba unendawo yokutyala kunye negumbi elaneleyo lokujonga,' ucebisa njalo uStephen McFarlane, Umphathi Wendawo Yokuma, IiSandals Resorts zamanye amazwe . Ipesenti elungileyo yezi zityalo iya kwenza kakuhle ngokuqaqamba, ngokungathanga ngqo ukukhanya , kwaye ukuba unegumbi elineefestile ezijonge emazantsi-, empuma- okanye entshona, unethamsanqa. Isityalo kufuneka sibekwe kufutshane kodwa hayi ngaphambili iwindow Ukuthintela amagqabi atshisiweyo, kunye nokujikeleziswa kwesityalo 'kwikota ejikelezayo veki nganye kuya kuqinisekisa ukuba onke amacala afumana ukukhanya okwaneleyo, uyaqhubeka uMacfarlane. Fumanisa izityalo ezisibhozo ezinkulu ezinamagqabi ekufuneka uzithathele indawo eluhlaza.
Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsi1 Umdwebo weFiddle Leaf Fig Inkqubo ithamsan.com$ 42.00 THENGA NGOKU
Isoyikiso esothusayo, ingxelo yefiddle igqabi lesityalo samakhiwane livelisa awona magqabi anomtsalane afana nevayolin. Amagqabi alo amakhulu anaba zii-intshi ezili-15 ubude ne-intshi ezi-10 ububanzi, kwaye angatsala ubushushu kwitropiki ekhayeni lakho. 'Ukunika i-TLC yakho igqabi lefiddle fiddle ikudinga kwaye kufanelekile, qiniseka ukubeka isityalo sakho phambi kwefestile engafakwanga eyakuthi ifumane ilanga ngqo, ucebisa uMcFarlane.
Mbini ILady Palm Izityalo zePafe pahlkants.com$ 380.00 THENGA NGOKU
Intokazi yesundu yintle, ukukhula kancinci kwesundu okulungelelaniswe nokukhula kwangaphakathi okwenzekayo ukunceda ekucoceni nasekucoceni umoya. 'ILady Palms ikhetha ukukhanya okuqaqambileyo, nokungangqalanga, njengoko ilanga elingacocwanga kakhulu linokutshisa igqabi, utshilo uMcFarlane. Kuba intokazi yesundu iyakhula kancinci, kubalulekile ukuba ujonge amanqanaba okufuma ngaphambi kokuba unkcenkceshele; amanzi kuphela xa iisentimitha ezimbini eziphezulu zomhlaba zomile. '
3 Unxantathu uFicus UBruceYangGarden etsy.com$ 23.00 THENGA NGOKU
Ukuba ungumzali wesityalo esitsha kwaye ufuna isityalo esihle esikhulu segqabi esingadingi msebenzi mkhulu, qwalasela iTriangle Ficus. Amagqabi aluhlaza amile okomthi wentliziyo anemibala emhlophe emhlophe kufutshane nemiphetho ayabanjwa kwizithuba zakho. Bathanda itoni yokukhanya okungangqalanga- ukukhanya ngokuthe ngqo kungonakalisa amagqabi, ke kungcono ukuwagcina kufutshane Iindawo ezikhanyiswe kakuhle ngaphandle kokuzibeka elangeni ngqo- kunye nomhlaba oqhelekileyo wokubumba oxutywe nomhlaba oqhelekileyo wegadi.
ghost ithanga izimvo
4 Khohlela I-Spring Hill Nursery imvamobile.com$ 18.65 THENGA NGOKU
Umdabu ovela eMantla mpuma eAsia, iiHostas ziyanyamezelana emthunzini kwaye zikhula njengokuqaqamba kweemaradi eluhlaza ukuya kumagqabi aluhlaza okwesibhakabhaka. Cebisa isityalo sakho kwikona enomthunzi yendlu yakho kwaye ubatyale kumhlaba otyebileyo we-organic nge-pH ene-asidi encinci.
5 Isitya se Iron Iron Amagqabi eWekiva Amazon.com$ 39.97 THENGA NGOKU
Amagqabi amakhulu aluhlaza esityalo sesinyithi aya kubekwa kakuhle kwindawo ebonakalayo kwigumbi lakho lokuhlala, lokutyela, okanye kwigumbi lokuhlala njengoko linokukhula libe ziimitha ezintathu ubude. Beka kwindawo enokukhanya okuphantsi ukuya kokuphakathi, kwaye ukunqande ukuyibeka elangeni ngqo. Sisityalo esomeleleyo, esigcina ulondolozo oluphantsi esiya kunyamezela iimeko ezininzi zemo engqongileyo.
6 I-Pin Stripe Calathea Plant kwi-6 kwi. Pot Pot Idepho yasekhaya imvamobile.com$ 19.98 THENGA NGOKU
Isibambisi yamehlo esaziwa ngomphumo wokucoca, isityalo se-calathea sinegalelo kwimozulu esempilweni yangaphakathi. Ifuna kuphela ilanga elingathanga ngqo ukukhusela kunye nokugcina amagqabi amakhulu okanye amagqabi. Ngelixa bekwazi ukukhula iintyatyambo ngaphakathi, bahlala bengatyatyambi. Ukuhoya iCalathea yakho, beka elangeni elingathanga ngqo kwaye ugcine umhlaba umanzi ngalo lonke ixesha.
7 Isityalo setshizi saseSwitzerland Utata etsy.com$ 44.99 THENGA NGOKU
Xa unobomi obuxakekileyo, isityalo esigcina ulondolozo oluphantsi yile nto uyifunayo kwindawo yakho. Isityalo setshizi saseSwitzerland sithanda imeko eshushu kwaye sakha ikona entle endlwini yakho kuba sisihlahla esinyukayo esinamagqabi aluhlaza. Esi sityalo sithanda amaqondo obushushu angaphakathi ngaphakathi anomswakama ophezulu.
zooey deschanel kunye noJonathan scott
8 Isicwangciso soMbona Iihempe zendlu yezityalo amazon.com$ 23.00 THENGA NGOKU
Esinye sezona zindala zezindlu ngokubhekisele ekuthandweni ekhaya, isityalo sombona sithandwa ngabantu baseYurophu ukusukela phakathi kwiminyaka ye-1800 kunye naseMelika kwangoko ngekhulu lama-20. Kulawo magumbi amancinci okanye iindawo ezixineneyo, khetha i-Corn Plant malunga nobume bayo obude kunye nobuncinci obufikelela kwi-4 ukuya kwi-6 yeenyawo ubude kwizikhongozeli. Esi sityalo sangaphakathi sikhula kakuhle sinomthunzi opheleleyo welanga kwaye asidingi manzi maninzi aya kuthi abangele ukutyheli kwamagqabi.
Ukuba i-champagne ibanda
hamba kwizicwangciso zekhabethe yomgangatho
phantsi komququzeleli wesinki wokuhlamba
Izimvo zomhombiso omnyama nomhlophe